Kuratidzira iro basa re otomatiki muBig Data - NewGenApps
analytics, Big Data, Big Data Analytics, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Kuratidzira iro basa re otomatiki muBig Data
Makambani ari kuburitsa dhata hombe kuti vachinje yavo yemadhijitari mamiriro uye nekushandura kwesangano mashandiro. Kuparadzaniswa kwedata kwave kuchishomeka nemabatiro nekuwedzera kweanoshanda analytics. Sezvo big data maitiro akaisa nhanho yekushandisa otomatiki, makambani atanga kusvetukira pane hombe data bandwagon nerubatsiro rwevanoongorora data.
Otomatiki yeBig Data ndeimwe yemabudiro anokanganisa shanduko kusvika parizvino. Dhata hombe iri rese rekuyedza dhata mapateni ayo anogona kuenderera mberi kubatsira mepu mune ramangwana bhizinesi mazano. Kana dhata hombe ikasangana nema automated maitiro, kuzivikanwa kweiyo chaiyo data ficha kunowedzera kurongeka.
Tsvagurudza kusvika ikozvino ..
Recently, MIT vaongorori vakaita iyo Big Data Analytics bvunzo izvo hazvisanganisiri chinhu chevanhu mukugadzirisa kwayo. Kubata kwevakawanda data science makwikwi neiyo prototype Data Science Machine yakaguma mukuita zvirinani kwekushandisa pane vanhu vanokwikwidza navo. Iyo nhanho yekururamisa yaive 96%. Chikamu chinonyanya kufadza ndechekuti michina yakadzora fungidziro algorithms mumaawa mashoma, ayo vanhu vakatora mwedzi. Chinangwa chekuyedza uku kwaive kugadzirisa Big Data Kuongorora kuongorora yakatarwa data uye kugadzirisa data rakanangana nematambudziko.
Iyo rondedzero yemakambani akabudirira kuita fungidziro vachishandisa hombe data ongororo iri kukura, sezvo ivo vatora mukana weiyo data sainzi kosi kukanzura maitiro e kufungidzira kuongororwa.
Zvichienderana netekinoroji yaunoshandisa, unogona kuyedza, kuongorora, uye kunzwisisa chero huwandu hwe Big Data pasina nguva. Zvakanakira otomatiki ndiko kuwedzera kwekushandisa kweBig Data matekinoroji, yakaderera mashandiro emari, kushanda kwakanyanya kushanda, uye nekuvandudza wega-ekuzvishandira ma module. Zvakare, inogona kuita seyakaverengeka chinongedzo chinoshanda mukati medatafura matafura mumaindasitiri akasiyana. Iyo inotofarira data rezvinhu kune chero imwe mhando yedata kukudziridza seti yezvinhu zvine zvimiro zvine hukama kune imwe neimwe.
Basa re otomatiki muData Sayenzi
Iyi modhi yakaita kutarisa kwakasiyana siyana ichishandisa data-rinosiyana-siyana data kuInstitute of Electrical and Electronics Injiniya Musangano Wepasi rose weData Sayenzi uye Advanced Analytics. Nekuda kwekururama kwepamusoro kwekufembera uku, kucherechedza uku kwakashandiswa kuita fungidziro yeramangwana yaive yechokwadi kwazvo. Kuti uzviise zviri nyore, iro basa re kushandisa michina zvinoenderana nezvinhu zvina.
Rega tivaone mumwe nemumwe
Nguva-inosiyana Big Data Kuongorora
Simba re automated Analytics rakakodzera kufunga sezvo rinotarisa pane yakasarudzika dhizaini uye inogona kugadzirisa yakawanda dhata mune pfupi nguva. Maitiro acho anonyanya kufunga nezvekupatsanurwa kweAnalytics muzvikamu zvakasiyana. Izvo zvikamu zvinosanganisira kunyorerwa kwedata, kupatsanurwa kwayo kuita nguva, uye kuzivikanwa kwe data maficha.
Gadzirira dhata yekuongorora
Automation yaderedza nguva yakatorwa yePredictive Analytics kusvika padanho rakakura. Izvo zvakabvisa kuomarara kwedanho rekufungidzira analytics; saka, yakabatsira masayendisiti e data kusimbisa maitiro e data kuongororwa. Otomatiki inoda mutauro wakasimba kuti utange maitiro ekuongorora nekurerutsa kuzivikanwa kwematambudziko ekufanotaura. Iyo inofunga nezve yakatemerwa fomati iyo inogona kubata nemhando dzakasiyana dzezvinotsanangurwa zvezvienzanidzo zviito zvekuisa mumapoka uye kunyora mazita.
Kuwana zvekufanotaura maficha
Automation inotora chinzvimbo chakakosha mukumiririra dhata mune inoverengwa fomati. Uyezve, inopa vaongorori kuti vawane matambudziko makuru ekufanotaura uye vawane mhinduro kwavari kuburikidza nekufungidzira analytics. Sezvo otomatiki inofarira kugovana dhata uye kuongorora, kusangana pakati peData Analysts uye maseru ehunyanzvi kwakawedzera zvakanyanya. Iye zvino, nyanzvi dziri muchinzvimbo chekushandisa mutauro wekuzviongorora kwekufungidzira kugadzirisa matambudziko ekufungidzira. Izvi zvaita kuti maitiro ese ekufungidzira anyatsojeka.
Zvinoenderana nekuwanika kweAutomated Analytics kumakambani. Cloud Computing provides companies with deeper insights into data in real-time. As you get access to Cognitive Computing Analytics and traditional Bhizinesi Njere, you will be able to evaluate data faster. Data Lakes and data preparation platforms have revolutionized predictive analytics. Moreover, the use of Semantic data processing has fastened the process of syncing data with other data.
Big Data Analytics otomatiki inokanganisa data sainzi munzira dzakawanda. Ndichiri kubvisa kuomarara, uyu wekuzvishandira modhi yakagonesa varidzi vebhizimusi kuchera zvakadzika mune data. Kunyangwe SMBs vanoziva simba rayo uye vakaronga kuburitsa nzira nyowani dzekuongorora kuti vanyatso shandisa analytics yekufungidzira.
Kana iwe uchitsvaga Big Data mhinduro dzesangano rako, ndapota bata.